Disabling Root Certificate
By Htet Wai Aung - February 20, 2021
⚠️❗️❗️မိမိဖုန်းက ကိုယ့်အချက်အလက်လုံခြုံ ရေးအတွက် အရမ်းအ ရေးကြီးပါတယ်။
⚠️စိတ်မရှင်းရင် ကိုယ့်အတွက်ဘယ် လောက်အ ရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပိုသိ အောင် ကိုယ်တိုင် Google မှာ ရှာပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
⚠️အချက်အလက် တွေသေချာဖတ်ပြီး လေ့လာ ဆောင်ရွက်ပါ။ (၁ဆင့်ချင်း ၁ပုံချင်းပြထားပါတယ်)
*ဖုန်းအမျိုးအစားအ ပေါ်မူတည်ပြီး နဲနဲကွဲပြားနိုင်ပါတယ်
⚠️ကိုယ့်ဖုန်း Setting က Government Root Certification Authority နေရာမှာ Disable လုပ်ကြပါ။ (*မလုပ်တတ်သူ တွေအတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်)
⚠️အထူးသဖြင့် China version Android ဖုန်း တွေ ပိုသတိထားပါ
✅1. Setting က Search မှာ Certificate (or) Trust (or) Credential လိုရိုက်ရှာလိုက်ပါ
✅2. ပုံပါအတိုင်း View Security Certificates လို ပေါ်လာပါမယ်။ အဲ့တာကိုနှိပ်လိုက်ပါ
✅3. စာလုံးအစဥ်လိုက် ဖော်ပြတာဖြစ်လို G နဲ့စတဲ့ Google Trust Services LLC အောက်ရှိ Government Root Certification Authority နေရာမှာ ဖွင့်ထားရင် ပုံပါအတိုင်းဖြစ် အောင် အကုန်ပိတ် ပေးပါ
✅4. ကိုယ့်ဖုန်းက Android Global အလုံး ဆိုရင် (အလုပ်အတွက်ပါသုံးရင်) Work Profile ၁ခုက နေ ၂ခု သီးသန့်ထပ်ပါနိုင်ပါတယ် (*ပုံပါအတိုင်း ရှာပြီး Work နေရာက Google Trust Services LLC အောက်ရှိ Government Root Certification Authority နေရာမှာ ဖွင့်ထားရင် ပုံပါအတိုင်းဖြစ် အောင် အကုန်ပိတ် ပေးပါ)
in 2019 that the Kazakhstan government has taken extreme steps to surveil citizens in its country. In particular, the government has been usingatool calledaroot certificate to spy on the online activities of citizens.